असोक दर्जीका बुवा र फुपु रुँदै मिडियामा: आखिर के भएछ ? (हेर्नुहोस पुरै भिडियो)
देश तथा बिदेशमा रहेका धेरै सहयोगी नेपाली मनहरुको सहयोगमा अशोकको जीवन मात्र हैन पुरै परिवारकै जिबनशैली नै फेरियो । अशोकलाई अहिले स्थापित गायक नै बनाएका छन टंक बुढाथोकीले । बिचमा केही विवाद आएपनी सबै कुरा सहज बन्दै चलिरहेको जिबनमा अचानक के भयो किन रुँदै मिडियामा आए त अशोकका बुबा र फुपु!
Prevनेपालसँगको सम्बन्धलाई चीनले विशेष महत्व दिएको : सी जिनपिङ
Nextविराटनगरमा शनिबारदेखि दुई हप्ताको लागि फेरि लकडाउन